China Products Factory, Products Supplier ဖြစ်သည်
BG200-4D အော်တို4nozzl ...
BG5000-8D အသိဥာဏ်မြင့် ...
BGX-2-1D Monoblock ဖြည့်စက် ...
BG5000-8D အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရည် ...
1-5L Detergent အရည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
BG5000-1 Liner အမျိုးအစားအရည်ဆပ်ပြာဖြည့်စက်သည်အစ မှစ၍ ပုလင်းမရှုပ်စေခြင်း၊ ပုလင်းသန့်ရှင်းရေး၊ ထုတ်ကုန်ဖြည့်ခြင်း၊ ပုလင်းပိတ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ လိုင်းထုပ်ပိုးခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းအဆုံးအထိ။ ၎င်းသည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်စနစ်ဖြစ်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောလိုင်းအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြီးကြပ်ရန်ကြီးကြပ်သူတစ် ဦး သာလိုသည်။ ၀ ယ်သူ၏လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေပြီးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မြင့်မားစေသည်။ 1L-5L မှ BG5000-1 ပုံစံများမှကွန်တိန်နာအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုဖြည့်နိုင်သည်၊ BG5000-1 မော်ဒယ်များသည်အရည်မှ viscous ထုတ်ကုန်သို့အမျိုးမျိုးသော viscosity ထုတ်ကုန်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ကြသည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးမှယနေ့ BG5000-1 piston အဆာသည် condiments အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ mayonnaise၊ ငံပြာရည်၊ သစ်သီးငါးပိ၊ mas၊ စားသုံးဆီ၊ ချောဆီ၊ အလှကုန်၊ မုန့်၊
စက်ပစ္စည်းသည်အလိုအလျောက်ဖြည့်ခြင်းနှင့်အဖုံးပိတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကို viscosity အဆာဖြည့်ခြင်းနှင့်သာမန်ဖိအားတစ်ခုထဲသို့ဖြည့်စေသည်။ high-viscosity mode အောက်တွင်စက်သည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်တိကျမှုကိုအာမခံနိုင်စေရန်အဆာခေါင်းကိုထိန်းရန်ဆလင်ဒါကိုသုံးသည်။ သာမန်ဖိအားဖြည့်ပုံစံအောက်တွင်ဖြည့်သောအစိတ်အပိုင်းသည်ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ပေးပြီးစက်ကဖြည့်ချိန်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားသောဖြည့်ဆေးပမာဏကိုသဘောပေါက်သည်။
အလှကုန်အရည် Packing Line
1. Sorting speed 100ml-1000ml ပုလင်း≤3000-10000bottles/hour
၂။ ပုလင်းထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ပုလင်း ၁၀၀% သေချာစေရန်၊
ဤစက်သည် rotary water cream filling machine ဖြစ်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်သည်အခြားထုတ်ကုန်များသို့ပြောင်းသည်
BGZ-1D 5L Semi မြင့် viscosity အဆာစက်
1 nozzle pneumatic5L အရည်ဖြည့်စက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ချက်ပြုတ်ဆီ၊ ချောဆီ၊ မြေပဲဆီ၊ ပဲပုပ်ဆီ၊ ပြောင်းဆီ၊ မော်တာဆီ၊ အအေးခဲစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအဆီပမာဏများအရည်အတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။
air-cylinder မှမောင်းနှင်သောဆီ-ဆလင်ဒါပစ္စတင်၏ထပ်ခါတလဲလဲရွေ့လျားမှုဖြင့်မောင်းနှင်သောအဆီ-ဆလင်ဒါပစ္စတင်၏ထပ်ခါတလဲလဲရွေ့လျားမှုဖြင့်မောင်းနှင်သောအရေအတွက် nozzle pneumatic 5L အရည်ဖြည့်စက်၊ ပိုများသောတိကျမှု၊ အမြန်ဖြည့်ခြင်း၊ ပိုမြန်ပြီးပိုတိကျသည်။
clorox အရောင်ချွတ်ဆေးများအတွက် Corrosive ဓာတုဖြည့်စက်
ကိရိယာသည် clorox အရောင်ချွတ်ဆေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရက်အတွက်အလိုအလျောက်ဆွေးမြေ့သောအရည်ဖြည့်စက်ဖြစ်သည်
ဒီဇိုင်းအပြည့်အဝအလိုအလျောက် IVD ဓါတ်ကူစက်ဖြည့်စက် Test Tube Filling Capping Machine
အလိုအလျောက်ဓာတ်ဖြည့်ဓာတ်ဖြည့်စက်အတွက်အလိုအလျောက်ဖြည့်စက်သည်အလိုအလျောက်ဓာတ်ဖြည့်စက်ကိုအဖုံးပိတ်ခြင်း၊ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း peristaltic အရည်ဖြည့်စက်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်ပလပ်စတစ်ပြွန်ဖြည့်အလုံပိတ်စက်သည် laminted tueb နှင့် plastic tube အမျိုးအစားများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ အစားအစာ၊ အလှကုန်၊ သွားတိုက်ဆေးစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
1. 50L SUS3016L အကျီအပူခံကန်
2. 12PCS Moulds/Set၊ မှိုအစုံနှင့်ကွဲပြားသောအရွယ်အစား
၃။ variable speed controller နှင့် Wall scrapper mixer
ဤစက်သည်လေသန့်ရှင်းရေး- ဖြည့်ခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းအဖုံးပါ ၀ င်သည့်အဖုံးပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် lotion၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ခရင်မ်နှင့်သင့်တော်သည်။
သံမဏိ 304 အလိုအလျောက်ပုလင်းစုဆောင်း turntable
2. AC varibale speed drive: အမြန်နှုန်းကိုတိကျစွာချိန်ညှိနိုင်သည်။
BG200-4D အလိုအလျောက် ၄ nozzle အဆာဖြည့်စက်နှင့်နှစ်ဆဘူတာရုံအဖုံးစက်
nozzle အဆာဖြည့်စက် ၄ လုံးနှင့် double station capping စက်တို့ပါ ၀ င်သည်၊ မြန်နှုန်းမြင့်သည်၊ တစ်နာရီလျှင် ၃၀၀၀ ဗူးနှုန်းထိရောက်နိုင်သည်၊ ဤစက်သည် 30ml ~ 500ml အတွက်သင့်တော်သည်၊ ၎င်းသည်ဆေး၊ ဓာတု၊ အစားအစာနှင့်အဖုံးပါသောပုလင်းများကိုဖြည့်ရန်သင့်တော်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပြားချပ်ချပ်၊ စတုရန်း၊ ဘဲဥပုံ၊ tapered နှင့် single orientation စသည်တို့